Update Software Latest 1.43 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.43 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Update Software Latest
Update Software Latest ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Update ကိုဆော့ဝဲနောက်ဆုံးရ & အနားယူ Download, App ကိုအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ installed Apps ကပ & အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် updates များကိုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး play စတိုး ပေါ်တွင် app updates များကိုဘို့သင့်ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်
Update ကိုဆော့ဝဲနောက်ဆုံးရ အလိုအလျှောက်ပုံမှန်ကြားကာလမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ် Apps ကပ & ဂိမ်းများ, System ကို apps တွေအတွက် updates များကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်
☞ App ကို & တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုမှုမီတာ
ဤသည်လိမ္မာပါးနပ်အင်္ဂါရပ်သင့်ဖုန်းဘယ်လောက်စွဲပြသထားတယ်။ ဒါဟာသင်ကပစ်လွှတ် & အချိန်တိကျတဲ့ကာလအတွင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့် app ကိုအသုံးပြုတဲ့အချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခဲ့သည့်အချိန်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
☞ အော်တို Update ကိုစစ်ဆေးမှု
တဦးတည်းစာမျက်နှာမှာအားလုံးဆိုင်းငံ့ updates များကို Get
☞ Update ကိုအသိပေးချက်များ
ဒီ app ကိုအလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများစစ်ဆေး play စတိုးအပေါ်ရရှိနိုင်တစ်ချိန်ကသင်အကြောင်းကြား။
အားလုံးသင့်ရဲ့ installed Apps ကပ & အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် update ကိုစစ်ဆေးသည်
☞ System ကိုလျှောက်လွှာ
Pre-installed စနစ် Apps ကပကြည့်ရန် updates များကို
☞ App ကိုလှုပ်ရှားမှု
ခွင့်ပြုချက်: ကြည့်ရန်မဆို install လုပ်ပြီးသားကအသုံးပြုအားလုံးခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ် System ကို Apps ကပ
ပြန်ဖြုတ်ပြီး App ကို: အ Upgrade လက်ထောက် app ကိုမှတိုက်ရိုက်မဆို app ကို Uninstall ။
☞ Store ကိုဗားရှင်း Play စစ်ဆေးမှု
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့သော app တစ်ခု၏ updated play စတိုးဗားရှင်း View
အဘယ်ကြောင့်သင် Update ကို Software များ Update ကို App ကို get သင့်တယ်
သင့်ရဲ့ဖုန်း Apps ကပ installed နှင့်သင်အမြဲသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်သူတို့အား app များကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုပေမည်, ဒီအဘို့, သင် app ကိုစစ်ဆေးသည်မှမလိုအပ်ပါဘူး Play Store ကိုအပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအပ်ဒိတ် 50+ ရှိပေလိမ့်မည်။ သငျသညျရိုးရိုး ဒီ app နဲ့အတူအလိုအလြောကျ feature နှင့်သင့် apps များ & ဂိမ်းများကို upgrade ရွှေ့ဆိုင်းအပ်ဒိတ်များ အသုံးပြု. အသစ် updated apps စာရင်းကိုရနိုင်။
အချိန်ကိုမှန်သည်လာသောအခါအများဆုံးကိစ္စများတွင်ဤနောက်ဆုံးသတင်းများသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကြာကြာလိုအပ်သောထက်တစ်စက္ကန့်စောင့်ဆိုင်းဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်သောသူတို့အဘို့, ကိုယ်တိုင် updates များကိုစစ်ဆေးသည်တစ်လမ်းလည်းမရှိ။
သင်ရုံ application ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင် app ကိုစာရင်းထဲကအပ်ဒိတ်လုပ်လိုသော app ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းကို installed လျှောက်လွှာစနစ်လျှောက်လွှာ & ဆိုင်းငံ့ထား updates များကိုခွဲခြားထားပါသည်။ တဦးတည်းထိတွေ့နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ apps များနှင့်ဂိမ်းများ Upgrade ။
ဒီ app အားလုံးကိုသင့် installed apps များများအတွက် updated ဗားရှင်းစစ်ဆေးနေစောင့်မမည်နှင့် Play Store ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမရရှိနိုင် update ကိုအတူ app တစ်ခုရှိပါတယ်လျှင်သင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
* စမတ် Features *
☆ချောမွေ့ User Interface
အပြည့်အဝ Feature ကိုအတူ☆အခမဲ့ App ကို
☆အသေးစား Apk Size ကို
Update Software Latest အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Update Software Latest အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Update Software Latest အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Update Software Latest အား အခ်က္ျပပါ
cramik စတိုး 33 52.59k
Update Software Latest ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Update Software Latest အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.43
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://quantum4you.com/privacy-policy.php
လက်မှတ် SHA1: A0:FF:F4:B0:22:49:89:A3:7A:C6:8E:0D:1C:FC:31:34:B0:C1:BB:1E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rajeev
အဖွဲ့အစည်း (O): Rajeev
နယ်မြေ (L): Hajipur
နိုင်ငံ (C): India
Update Software Latest APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ